Zvakanaka zvekunze: zvavari, maitiro uye mienzaniso | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 19/05/2022 12:00 | Environment
ari zvakanaka zvekunze vanoreva zvakasiyana-siyana zvinobatsira zvisingaenderane nemitengo yekugadzira kana kushandiswa kwemabasa munharaunda. Chokwadi ndechokuti zviito zvedu zvose munharaunda yatinogara, pasinei nokuti zvingava zviduku sei kana kuti zviri nyore sei mumaonero edu, zvine migumisiro kune vamwe vanoiumba. Mune mamwe mazwi, rudzi urwu rwekunze rwunoitika kana zviito zvatinotora sekambani, semunhu, kana semhuri zvine mugumisiro unofadza uye unobatsira pane zvimwe zvose.
Muchinyorwa chino tichatarisa pakutsanangura kuti ndezvipi zvakanaka zvekunze zvinosanganisirwa, hunhu hwavo uye kubatsira kwavo.
1 Ndezvipi izvozvo
1.1 zvakanaka zvekunze
1.2 zvakaipa zvekunze
2 Nzira yekudzora sei zvakaipa zvekunze uye kuwedzera zvakanaka?
3 Kushandiswa kwekunze
zvakanaka zvekunze zvose zvakanaka zvinokonzerwa nemabasa enhengo dzenzanga, isina kujeka mumitengo kana kuti mabhenefiti ezviitwa izvozvo. Tsanangudzo yekunze kwakanaka haina kuganhurirwa kune chero imwe nzvimbo kana sainzi, inosanganisira zvese izvo zvakanaka zvinokonzeresa, zvihombe nezvidiki, izvo zviito zvechero munhu kana kambani zvinogona kuita munharaunda yedu.
Tiri kutaura nezvezvakanaka zvekunze izvo zvisingabatanidzwe mumitengo yekugadzira kana mitengo yekutenga, asi izvo inogona kuva nemigumisiro inobatsira zvikuru kunzanga yose zvayo. Kudyarwa kwezvipatara nemarabhoritari kuwana mishonga yezvimwe zvirwere muenzaniso weizvi. Pakutanga, unogona kufunga kuti kuzvipira uku kuR&D kunogona kudhura zvakanyanya kana vaongorori vakatadza kuwana mushonga nekukurumidza.
Chokwadi chinotiudza zvakapesana, kuti rudzi urwu rwekuita rwakakosha pakugara zvakanaka uye hutano hwevanhu, nekuti nekukurumidza kana gare gare mushonga uchawanikwa unoderedza mhedzisiro yechirwere chakabatana. Mushonga uyu, unotora nguva kuwana, wakasanganiswa nekudyara kukuru kwemari, ichave nekunze kwakanaka kwazvo munharaunda nekuponesa zviuru zvehupenyu, asi izvi hazviratidzike mumutengo wekuita ongororo yakareba uye yepamusoro.
Saizvozvowo, kune zvimwe zvakawanda zviitiko zvinogona kuunza zvakanaka zvekunze munharaunda, izvo zvakare zvakakosha pakushanda kwayo nemazvo:
Isai mari mukuchengetedza zvinhu zveveruzhinji (migwagwa, zvivakwa, mapaki, nhandare, zvipatara).
dzidzo (kuchengetedza zvikoro, vadzidzisi vanokwanisa, kosi yedzidzo yakakwana).
Kuongorora Kwezvokurapa (majekiseni, madhiragi, kurapa kutsva).
Kusiyana nekunze kwakanaka, kunze kwakashata mugumisiro wekuita chero basa rinokonzera kukanganisa kunzanga, isingarevi mutengo wayo. Kunyangwe isu tiri kubata nemaconcepts kubva mundima yehupfumi, aya pfungwa anogona kuwedzeredzwa kune chero chikamu chehupenyu hwezuva nezuva.
Muenzaniso wakanaka wekunze kwakashata ndiko kusvibiswa kwezvakatipoteredza, kunyanya indasitiri, nemakambani makuru. Fungidzira chiitiko chekambani huru yemigodhi inyanzvi mukuchera uye kugadzira marasha. Pakuyera mutengo wekuita basa, havatarise mwero wepamusoro wekusvibiswa kwauchakonzera kune zvakatipoteredza. Izvi zvinotariswa kunze kwakashata uye mhedzisiro yekugadzirwa kwekambani uye haisi kuratidzwa mumutengo wekutengesa kana mutengo wekugadzira marasha.
Kana tikamira uye kufunga, zvinenge zvose zviito vane kunze kwakashata kunzanga. Semuenzaniso, kushandiswa kwefodya kune zvinokuvadza kune hutano hwemushandisi, asi kunogadzira kunze kwakashata sekuderera kwezvivakwa (kana munhu achiputa mukamuri, madziro anogona kusvibiswa uye kukuvadzwa neutsi), uye anogona kutove nemhedzisiro yakaipa. pautano hwomumwe munhu (varwere vane asthmatic vanofema utsi hwefodya).
Nzira yekudzora sei zvakaipa zvekunze uye kuwedzera zvakanaka?
Hurumende ine matanho ekudzora uye kuderedza chizvarwa chekunze chisina kunaka, senge:
Mitero pamakambani anosvibisa zvakanyanya ku kukurudzira kushandiswa kwesimba rinogoneka uye maitiro ekugadzira anoenderera.
Rongedza zvimwe zviitiko (semuenzaniso, kuputa, traffic mumaguta makuru).
Zvirongwa zvedzidzo uye ruzivo rwemagariro evanhu.
Nekune rimwe divi, kune zvakare nzira dzinosimudzira nekuwedzera zvakanaka zvekunze zvinogadzirwa nemakambani nevanhu:
Grant kuzvikoro zvedzidzo (manesi, zvikoro, nezvimwewo).
Ipa mari yekutsvaga nekusimudzira, kunyanya mune zvesainzi uye zvekurapa.
Zvekunze, zvingave zvakanaka kana zvisina kunaka, havapo chete muchikamu chehupfumi chenzanga. Mhando ipi neipi yemaitiro, sekusvuta kana kukanda plastiki padivi penzira, inogona kuve nemhedzisiro yenguva pfupi / yakareba kunzanga, inogona kuve yakaipa kana yakanaka, zvichienderana nehunhu.
Mamwe maitiro evatengi anogona kunge aine ekunze pesvedzero kana yechipiri mhedzisiro isingatariswe mumutengo wekutengesa. Kushandiswa kwekunze kwekunze kunogona kuva kwakanaka kana kusina kunaka. Mari kana mabhenefiti ekugadzira, kushandiswa kana kudzokorodza kunofanirwa kuverengerwa pakuumba mitemo yehupfumi hwegirinhi.
Zvekunze zvinomuka kana kodzero dzemidziyo nekushandiswa kwezviwanikwa zvinongopa mabhenefiti ega pasina kufunga zvakaipa kana zvakanaka zvinokonzeresa.
Muchidimbu, iwe pachako unogona kupesvedzerwa kune zvirinani kana kuipa pasina kuve nechekuita mukutenga kana kutengesa chigadzirwa. Chero zvazvingava, kupindira mubasa rehupfumi iri kwakakosha kuvandudza hutano hweavo vanobatwa.
Kuti zvive zvakanaka, mitengo yemusika inofanirwa kuenderana nemitengo yavo kana mabhenefiti. Kana chigadzirwa chitsva chine zvishoma zvisina kunaka kunze uye/kana zvimwe zvakanaka zvekunze pane zvechinyakare, asi zvichidhura kugadzira, zvinofanirwa kubhadhariswa mutero. Mari inoshandiswa munharaunda ichabhadharwa nekuderedza mari inoshandiswa neveruzhinji gadzirisa zvekunze zvisati zvaitika. Zvigadzirwa zvinozove nemitengo yemakwikwi pasina kurasikirwa nepurofiti uye vatengi vanozokurudzirwa kutenga. Vagadziri vanokunda, vatengi vanokunda, uye nharaunda inokunda.
Nechikonzero ichi, isu tinofanirwa kufunga nezvekunze kwezvakatipoteredza uye kuongorora zvakananga uye zvisina kunanga kukanganisa kwekugadzirwa kwezvakatipoteredza. Kukosha uku kunofanirwa kuverengerwa kana uchienzanisa zvigadzirwa, kunyanya kana kutenga kuri kweruzhinji. Chigadzirwa chakachipa hachisi nguva dzose chakachipa.
Somuenzaniso, nyika dzinobudisa carbon dioxide yakawanda dzinofanira kubhadhara mitero yakawanda. Ndosaka hurumende ichifanira kuranga makambani anosvibisa. Zvekare, makambani aya achapfuudza mitengo iyi pamutengo wekutengesa. Nekuda kweizvi, makambani egirinhi anowana kukwikwidza. Aya mazano ekukurudzira akagadzirirwa kuderedza kunze kwakashata.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvezvakanaka zvekunze uye maitiro avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » zvakanaka zvekunze
Mhando dzemapaini muSpain